रविको टिमलाई प्रवेश गर्नै बन्देज लगाइयो ? रहस्मय र सनसनीपूर्ण खुलासा: मनै चुडाउने एक दर्दनाक कथा « Pana Khabar
संसारका विकसित देशमा हप्ता दश दिन बसेर आइफोन र आइप्याड मात्र ल्याउन हो भने नेताज्यु तपाई विदेश भ्रमणमा नजानुस !
निर्वाचनका अन्तिम परिणाम आउने क्रममा छ र जनताले चुनेका व्यत्तिहरुको सरकार पनि चाँडै बन्ने छ । केही बेर विगतको समीक्षा गरौँ, जस्ले भविष्यलाई सहयोग पु¥यायोस । विकास र समृद्वीको सुगा रटाइ गर्नुपुर्व संसारका सफल लिडरको कार्यक्षमता र परिवर्तनको व्यग्र चाहान बारे कुरा गरौं ।
क्षेत्रफलका हिसाबले, हाम्रो मुलुक विकास गर्न युगौँ कुर्नु पर्दैन । सहि प्लानिङ र भिजनका साथमा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्व मन्त्रीमण्डल बन्यो र अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले चाहे भने आँखै अगाडी मुलुक विकसित भएको देख्न सकिन्छ । अब, विदेश जाँदा श्रीमातको सपिङ लिष्ट बोकेर सुटकेश भरी गरगहना लुगाफाटा बोकेर आउने होइन आँफु गएको देशको विकाशको मोडल र त्यस देशका विज्ञ प्लानरहरुलाई आँफुसँग प्लेन चडाएर ल्याउनु जरुरी छ ।
दुबईका राजा, राजकुमार अमेरीका गए त्यहाँ भएको बाटो घाटो र रोड सिष्टम देखेर प्रभावीत भए र त्यहाँका व्यक्तीलाई कन्सल्टेन्टका रुपमा महगाें पैसा तिरेर ल्याए । आज हेर्नुस त्यहाका बाटोघाटो कस्ता छन् ?
चाइना, जापान, कोरीया, रुस, सिंगापुर, मलेशिया सारा देशका राजनीतिज्ञहरु जबजब अर्को देशमा जान्छन् तब तब आँफु गएको देशको राम्रा कुरा सिकेर र कपि गरेर आफ्नो देशमा ल्याउँछन् । आइडिया सँगै त्यस देशका निर्माण कम्पनी र डिजाइनर दिग्गजहरु समेत झिकाउँछन र त्यो भन्दा राम्रो संरचनाहरु बनाउँछन् ।
कसैले स्कुल कलेज, युनिभर्सिटी कपी गरेका छन्, कसैले मेट्रो रेल लगाएतका पब्लिक ट्रान्सर्पोटेसन सिस्टम कपी गरेका छन् । कसैले आर्थिक निति ल्याएका छन्, कसैले राजमार्ग, टनेल ल्याएका छन्, कसैले सिँचाइ र जलविद्युतको नयाँ नयाँ मोडेल ल्याएका छन्, कसैले टुरीजम डेभलप्मेन्टका युनीक युनीक आइडीया ल्याएका छन् ।
देश त हाम्रा नेताहरु पनि जान्छन् । सायद अरु देशका नेताहरु भन्दा बढि नै जान्छन्, तर ल्याउँछन् के थाहा छ ? त्यहाँ बस्ने नेपालीले दिएको मोवाइल सेट, ल्याप्टप, चश्मा, घडी आदी आदी । एरर्पोर्ट पुगे देखी एरर्पोटबाट नउडे सम्म आ आफ्ना पार्टीका भातृसंगठनका कार्यकतासँगको भ्याइनभ्याइ भेटघाट र यसो एक दुइ दिन आँफु गएको देशका छुटाउनै नुहने पर्यटकीय स्थलमा फोटो खिच्ने कामले लखतरान नेताज्युलाई विदेश बस्ने धनीमानी नेपालीहरुको घरमा डिनर खाने डेट मिलाउन नसकेरै टाउको दुखेको हुन्छ ।
कहाँको रेल, मेट्रो, टेक्नोलोजी, टुरीजम, हाइवे, टनेल, सिष्टम । विश्वास नलागे फर्केर आउँदा नेताज्युहरुको सुटकेश चेक गरि हेर्नुहोला । अब पनि संसारका विकसित देशमा हप्ता दश दिन बसेर आइफोन र आइप्याड मात्र ल्याउन हो भने नेताज्यु तपाई विदेश नजानुस । तपाईका लागि लेटेस्ट भर्सनका फोनहरु यतै बसेर मगाउन सकिन्छ ।
गएको शनिबार न्युज २४ टेलिभिजनबाट लाइभ प्रशारण भएको कार्यक्रम सिधाकुरा जनतामा रवि लामिछानेले एक ओमानमा अलपत्र परेकी एक नेपाली चेलीले रुदै भिडियो कार्यक्रममा पठाएकी थिईन उक्त भिडियो प्राप्त भएपछि २ घण्टामा ओमान राजदुतावासमा सम्पर्क गरेर पिडितको बारेमा जानकारी दिएको बताएका थिए ।
अस्ति आइतबार मध्य रातमा रवि आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत लाइभ आएर पिडित नेपाली चेलीको उद्धार भएको जानकारी दिएका छन् भने अन्य सम्पूर्णकुराको जानकारी आजको कार्यक्रममा दिएका छन् ।
पिडित चेलीको भिडियो प्राप्त भएपछि २४ घण्टा पनि नबित्तै यसरी उद्धार हुनुले रवि र उनको टिम सिधाकुरा जनता संग साथै न्युज २४ टेलिभिजन प्रति धेरै दर्शकहरुको भरोसा बढी रहेको छ ।
सिधाकुरा जनतासंगका प्रस्तोता रवि लामिछानेले साच्चिकै अन्याय- अत्याचारमा परेकाहरु निमूखा र पिडितहरुको लागी जस्तोसुकै दवाब आएपनी आफुले निष्पक्ष भएर अन्याय,अत्याचार र सामाजिक बिकृतिको विरुद्ध आवाज उठाउँन र न्याय दिलाउनको लागी पहल गर्ने नछोड्ने बताउँछन्।
रविले नेपालमा मात्रै होइन बिदेशमा समेत नेपालीहरुलाई ठग्ने र ठगी धन्दा चलाउँनेहरुलाई समेत छोडेका छैनन्। छोटो समयमै ईमान्दारीताका साथ जनताको पक्षमा काम गरेकाले रवि लामिछाने चर्चित त बनेका छन् नै उनी आफैँ देश बिगार्ने नेताहरु र गलत गर्ने विरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुन्छन्।
झुक्याएर धर्मपुत्र बनाईएको छोराको स्मेनमा मृत्यु, संस्थामा छिर्नै बन्देज, २४ घण्टामै चेली निशाको उद्धार